Imtixaanku waa mid ka mid ah muddooyinka muhiimka ah ee habka horumarinta software-ka. Marka la eego marxaladda imtixaanka aan si sharci ah loo hirgelin, waxaa jira fursado badan oo ah in la'xaad la'aanta iyo yaraanta ee software aan la heli doonin. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la helo fikrad ah koorsooyinka imtixaanka ugu fiican ee la heli karo si looga faa'iidaysto.
Koorsooyinka ugu fiican ee imtixaanka software:
1. Koorsada Shahaadada ee Certified Software Certified Software (CSTP):
2. Maamulaha Shahaadada Shahaadada ee CERT (CTM):
3. Maamulaha Maareynta Tayada Barnaamijka Tayada Barnaamijka (CSQM):
4. Koorsada Shahaadada Aqoonsiga ee Shahaadada Aqoonsiga Barnaamijka Software (CSTAS):
Baro Imtixaanka Software
Halkan waxaa ah khasaare qayb ka mid ah koorsooyinka ugu fiican ee imtixaanka software kaas oo isku dayi kara khubarada.
Kooraska shahaadada shahaadada ee shahaadada ee shahaadada ah
Kooraska shahaadeynta shahaadada shahaadada ee shahaadada ah
Koorasyada shahaadaynta shahaadada ee shahaadada barnaamijka ee shahaadada
Shahaadada shahaadada shahaadada ee shahaadada ee barnaamijka shahaadada ah (CSTAS)
Shahaadadan tijaabada ah ee koorsada tijaabada ah ee barnaamijka waxaa loogu talagalay inay xoogga saarto waxyaabaha muhiimka ah iyo hababka ugu fiican ee imtixaanka software. Nidaamka koorsada waxaa loogu talagalay dhibcaha in ay awoodi karto iyada oo aan wax badan oo fuulin ah la raadinayo ka dib markii ay caruurtu ku dhasheen xirfadahooda ee tijaabinta shaandhaynta. Koorsadan shahaadaynta waxay dhiirigelineysaa khabiirada si ay u sameeyaan qaar ka mid ah dejinta kiisaska imtixaanka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo helitaanka awood xoog leh oo ku saabsan baaritaanka software.
La socoshada ayaa ah qaybaha gaarka ah ee koorsada shahaadadan lagu siinayo musharixiinta:
Sameynta iyo si habboon u fulinta kiisaska imtixaanka ee hawlaha agagaarka ah
Xarun si loo abuuro tusaalooyin tijaabo ah oo dib loo isticmaali karo mashaariic kala duwan
Kala soocista aqoon isweydaarsiga
Abuuritaanka hababka ugu fiican, hababka, iyo habka loo qorsheeyo kiisaska imtixaanka
Diirada saarista helitaanka shuruudaha looga baahan yahay sameynta kiisaska imtixaanka
Wax ka qabashada habka wax-qabadka ee soo socda
Meelaha loo maro jidadka iyo sifooyinka sharciga ah ee baahida macaamiisha
Ku-nuuxninta waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee otomaatiga imtixaanka
Koorsadani waxay ku xoojineysaa garsooraha imtixaanka si loo helo imtixaanka software loo baahan yahay si loogu caawiyo inay ku soo ururiyaan xirfadahooda shaqsiga.
Kooraska shahaadaynta ayaa waxaa weheliya dad badan oo ka soo jeeda dadweynaha sannado badan oo ka mid ah ka qayb qaadashada goobta imtixaanka, laakiin maaha takhasusle. Koorsadan tijaabada ah ee shahaadada barnaamijka shahaadada ah waxaa loo arkaa koorso kala geddisan oo ay bixiso IIST-da khabiirada tijaabada ah. Dhismaha koorsada waxaa loogu talagalay dhibcaha in ay xarun ku leedahay xoojinta kartida iyo barashada khabiirada.
Isuduwaha ayaa ah qaybaha dabiiciga ah ee koorsadani bixiso:
Wax ka qabashada foomamka kala duwan
Maamulka maareynta tijaabada
Hubinta iyo kobcinta qorshaha imtixaanka iyo hababka
Xoog-saarida maaraynta khatarta
Muujinta farsamooyinka iyo nidaamka baaritaanka otomaatiga
Fursada shuruudaha shahaadada tayada softwareka.
Inta badan, khabiirada leh dhowr sano oo ka mid ah ka qayb qaadashada imtixaanka software iyo kuwa doonaya in ay kordhiyaan fikradahooda iyo horumarinta furfurid waxay sii wadi doonaan shahaadadan.
Marka laga reebo xoogga saarista hagaajinta iyo macluumaadka khubarada ka imtixaanka tijaabada ah, koorasyadan shahaadaynta ee ku saabsan hirgelinta awooda lagu ilaalinayo tayada software. Shahaadadu waxay ku darsataa xeeldheer khabiirada iyaga oo siinaya sifooyinka wax ka qabashada tayada software-ka. Khabiirada haysta shahaadadani waa mid aad iyo aad uwanaagsan oo qayb weyn oo ka mid ah ururrada mudnaanta leh ee helitaanka isku-darka dhamaantiis ee tijaabinta software-ka iyo ilaalinta tayada.
La socoshadu waa dhulalka faahfaahinta ee koorsada shahaadadani bixiso:
Horumarinta hababka lagu ilaalinayo tayada software-kaSameey sawir muuqaal leh
Ka shaqeynta horumarinta farsamooyinka loogu talagalay xaqiijinta tayada software
Sameynta habraaca jeegga si loo xaqiijiyo tayada software
Kaalinta taageerada horumarinta iyo isdhexgalka software
Wax ka qabashada qaababka software
Horumarinta xeelado loogu talagalay horumarinta barnaamijyada agaasimaha
Abaabulidda kormeerka iyo baaritaanka software-ka
Koorsada shahaadaynta waxay ku salaysan tahay tayada barnaamijka tayada qalabka, iyadoo la raacayo qadadahaan si isku mid ah marka laysku daro shahaadooyinka tijaabada ah ee software.
Tani waa mid ka mid ah koorasyada imtixaanka ee software kuwaas oo loogu talagalay mas'uuliyiinta ee goobta imtixaanka software. Khabiirada raadinaya inay kordhiyaan aragtideeda iyo inay qaataan hababka cusub ee hagaajinta nidaamka imtixaanka software dooro koorsada shahaadadan. Shahaadada kumbuyuutarka imtixaanka ee barnaamijka waxaa lagu qeexayaa khabiirada kuwaas oo ku dhowaad 10 sanado ku lug lahaanshaha imtixaanka software. Waxaa ku jira heerar badan oo rukumo ah iyo fikrado loogu talagalay wanaajinta foomamka imtixaanka software iyo gudbinta natiijooyinka macquulka ah ee loo baahan yahay.
La socoshada ayaa ah waxyaabo ay ka mid yihiin in koorsada shahaadadani ay siiso musharrixiinta:
Soo bandhigida walxaha si qarsoodi ah ee otomaatiga imtixaanka
Abaabulidda kiisaska imtixaanka si loo fuliyo habka otomaatiga
Horumarinta istaraatijiyadaha iyo hababka loogu talagalay hubinta qalabka
Qorsheynta iyo horumarinta injineernimada imtixaanka otomaatiga
Qorsheynta kiisaska imtixaanka si loo hubiyo tayada software-ka
Haysashada doodaha imtixaanka si loo xaqiijiyo barnaamijka ka hortagga khatarta
Shahaadadani waa mid ka mid ah shuruudaha shahaadada ee shahaadada ee tijaabada ah ee software iyo damaanad qaadka ugu muhiimsan ee la xiriira imtixaanka software.
ee Xoomaha 2